China Nkedo Box maka Static Pressure Automatic Nkedo Line factory na suppliers | Sofiq
1. Lekwasị anya na nnukwu / ọkara size oge ọgbụgba, nakwa dị ka obere size omume.
2.Gray ígwè / Ductile ígwè mgbatị na Resin-bonded ájá mgbatị usoro.
1. Nlele ma ọ bụ Ihe osise nke onye ahịa
Ntuziaka & mkparịta ụka
3.3D Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ
5.Rough akụkụ emeputa
6. Ngwaọrụ CNC
7.Fitting & rụchaa
8. Ngwunye Ngwongwo & Nyocha
10. Mmepụta Ọnwụnwa
12. Ikpe ikpeazụ
13. Nnyocha Nlereanya
14.Slele Nkwado ndị ahịa
15. Nkwado Kwadoro
Ọkọlọtọ ISO9001, GB, BV
Ihe onwunwe Igwe ntụ ntụ 200, 250, 300, 350, 400
Ctgwè 400, 500, 700
Nha & Imewe Dika ihe osise na ihe ndi choro
Ogologo ibu Oke kachasị otu mpempe akwụkwọ 80 MT
Na-azụ ahịa CNC igwe, Machine center, Vetikal lathe,
Digital n'ala-agwụ ike ma na-egwe ọka igwe, malite ịgba igwe,
Ule Onye na-agụ akwụkwọ na-agụ ya / German SPECTRO,
Automatic dijitalụ carbon & sọlfọ analyzer,
Igwe ihe nlere na-emetụ ala,
60MT Hydraulic eluigwe na ala ule igwe, wdg
Ọgwụgwọ ihu Ọgwụgwọ ọgwụgwọ, ịkpụchasị, ịchacha mmanụ, eserese, wdg.
Mbukota Dị ka ndị ahịa chọrọ
igba ígwè, isi awọ iron mgbatị, ductile iron nkedo, elu mma na kpọmkwem nkedo ígwè maka igwe ngwaọrụ, nnukwu na-ajụ-sizedcasting ngwaahịa kpọmkwem site anyị si factory
Weifang Sofiq Machinery Co., Ltd. bụ a sayensị na nkà na ụzụ ụlọ ọrụ, emi odude ke Weifang City Hanting district nso Beihai Road, adaba njem. H anshuo Machinery na-arụ na foundry igwe n'ichepụta ọkachamara soplaya, imewe na imewe nke ndị na-esonụ isi ngwaahịa: karama na pallet ụgbọ ala maka ịkpụzi akara, akpaka static mgbali akpụzi akara, akpaka, ọkara akpaka usoro nke karama akpụzi akara, akpaka ileghara flasks kwụ ịkpụzi akara, ọkara akpaka agbapụtara igwe na inyeaka igwe nke ịkpụzi akara, mechanized ịkpụzi akara, n'ibu ịkpụzi akara, BLT, JYB usoro nke ọnụ ọgụgụ ebu na dị iche iche na-abụghị ọkọlọtọ efere ebu.
Anyị factory na-ọma-onwem na nwere a-nke-art oru ike, anya nchọpụta n'aka. Ruo ọtụtụ iri afọ, anyị na-agbakọta akụ na ụba nke mmepụta ihe na ikike na ọkwa dị elu. Site ọkachamara ngwaahịa na layout emebe, anyị na-enye ịkwa akwa mere ka ihe ahịa.
Companylọ ọrụ ahụ na-akwado ụkpụrụ ndị dị mkpa nke "ịmepụta uru maka ndị ahịa", ma rube isi na ịkwụwa aka ọtọ na ịba uru iji nweta ọnọdụ mmeri. Na-aga n'ihu ọhụrụ, anyị na-agba mbọ ka kpọbata anyị zuru okè ngwaahịa na kasị mma ọrụ ahịa.
Site ọkachamara ngwaahịa na layout emebe, anyị na-enye ịkwa akwa mere ka ihe ahịa. Dabere na elu owuwu, mma nhazi technology, nlezianya nhazi akara na àgwà nnyocha, anyị mgbe niile kwere na echiche nke àgwà mbụ na ndị ahịa afọ ojuju.
1. you bụ onye nrụpụta ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa?
Anyị na-emekwa ụfọdụ ihe nkedo ígwè n'ichepụta ọkachamara soplaya
2. Kedu ka m ga-esi nweta ụfọdụ nnwale?
Ọ bụrụ na ịchọrọ, anyị ga-enwe obi ụtọ ịnye gị n'omume n'efu, mana a na-atụ anya ka ndị ahịa ọhụụ kwụọ ụgwọ ozi ahụ, a ga-ewepụ ụgwọ ahụ site na ịkwụ ụgwọ maka usoro iwu.
3. Can nwere ike ịme nkedo dịka eserese anyị?
Ee, anyị nwere ike ịme mgbatị dịka eserese gị, eserese 2D, ma ọ bụ ihe atụ 3D cad. Ọ bụrụ na enwere ike ịnye ụdị 3D cad, mmepe nke ngwa ọrụ nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma. Ma na-enweghị 3D, dabere na ịbịaru 2D anyị ka nwere ike ịme ka ihe atụ ndị a kwadoro nke ọma.
4. you nwere ike ịme mgbatị dabere na ntanetị anyị?
Ee, anyị nwere ike ime mmeson dabere na ihe atụ gị iji mee eserese maka ịme ngwaọrụ.
5. Gịnị bụ gị mma akara ngwaọrụ ke ufọk?
Anyị nwere spectrometer n'ụlọ iji nyochaa akụrụngwa kemịkalụ, igwe nyocha nke ikuku iji chịkwaa akụrụngwa akụrụngwa na UT Sonic dị ka usoro nyocha nke NDT iji chịkwaa nkedo a na-achọpụta n'okpuru mgbatị.
Nke gara aga: Flask maka akpaka ịkpụzi akara
Osote: High Quality Nkedo Flasks akpụzi Flask Gray Iron Sand akpụzi Flask
Assembly agụụ flask
Automatic Aja Nkedo Machine
Flask Na Nkedo
Flask ， Flask Na Ibu Moving Ngwaọrụ
Foundry Sand Nkedo Flask
Metal Nkedo Flask
Nkedo Flask Na Foundry
Sand Nkedo Flask
Flask Nkedo, Ọkara Automatic Nkedo Machine, Nkedo Nkedo Flask, Punch Out igwe, Sandbox, Flask akpụzi Machine,